Sunday November 17, 2019 - 12:09:18 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Saraakiisha booliska dowladda Kenya ayaa sheegay in lahelay meydadka sedax ruux oo uu dilay mid kamida saraakiisha ciidamada melleteriga ee KDF-ta loo yaqaan.
Baarayaasha Booliska iyo sida melleteriga utababaran ayaa sheegay in Meydadka oo laga helay xabaalo kuyaal deegaanka Nanyuki ay kala ahaayeen haweenay uu qabay sarkaal melleteri ah iyo carruur ah oo ay dhashay.
Sarkaal melleteri ah ayaa si qarsoodi ah udilay haweenaydan iyo carruurteeda oo sarkaal kale qabay kadibna meydadka dadka uu dilay ayuu ku aasay xabaalo horay dadka loogu aasi jiray.
24 saacadood kadib markii dilku uu dhacay ayaa baaritaan lagu helay helay xabaalaha dhibanayaasha lagu aasay, dhacdadan ayaa fajac iyo layaab ka dhax abuurtay gudaha saldhigga ciidanka cirka Kenya ee Laikipia waxaana gacanta lagu dhigay eedaysanayaal falkan loo heysto waxaana kamid ah sarkaal lagu magacaabo Peter Mwaura.
Saraakiisha melleteriga Kenya ayaa sanadadii dambe isku geysanayay falal dilal ah waxaana badanaa falal dambiyeedyadan geysta askarta iyo saraakiisha kasoo laabtay dagaalka ka socda Soomaaliya oo ay kala kulmeen xaalado nafsaani ah oo ay ka dhaxleen diifta dagaalka.